सौरभ गांगुलीले किन भने– भारतीय क्रिकेटलाई भगवानले मात्रै बचाउन सक्छ? - Everest Dainik - News from Nepal
सौरभ गांगुलीले किन भने– भारतीय क्रिकेटलाई भगवानले मात्रै बचाउन सक्छ?
एजेन्सीः भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली र स्पिनर हरभजन सिंहले भारतीय क्रिकेटलाई भगवानले मात्र बचाउन सक्ने बताएका छन् । गांगुली र सिंहले ट्विट गर्दै भारतीय क्रिकेटमा चलिराखेको विवादबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
गांगुली र सिंहको यस्तो अभिव्यक्ति त्यस्तो बेला आएको छ जब भारतका अर्का पूर्व कप्तान राहुल द्रविडलाई भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड-बिसिसिआईका लोकपाल डीके जैनले स्पष्टिकरण मागेका थिए ।
द्रविड नेसनल क्रिकेट एकेडेमीका प्रमुख हुनुका साथै इन्डिया सिमेन्ट ग्रुपका उपाध्यक्ष समेत हुन् । इन्डिया सिमेन्ट आइपिएल टीम चेन्नई सुपर किंग्सको अधिकार भएको कम्पनी हो । उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा बिसिसिआईसँग हितहरू बाझिएको बताइएको छ ।
डीके जैनले मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ- एमपीसीएका एक सदस्य संजीव गुप्ताले दिएको निवेदन अनुसार उक्त स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । गुप्ताले यस अघि सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली र भीभीएस लक्ष्मणविरुद्ध पनि हितहरू बाझिएका भन्दै बिसिसिआईमा रित हालेका थिए ।
समाचारमा छाइरहने तरिका: गांगुली
गांगुलीले ट्वीटमा भनेका छन्, “हितोहरूमा टकराव नामक नया फेसन भारतीय क्रिकेटमा चल्दैछ । यो समाचारहरूमा छाइराख्ने राम्रो तरिका हो । भारतीय क्रिकेटलाई भगवान नै बचाओस । अब बीसीसीआइले द्रविडलाई स्पष्टिकरण दिन भनेको छ ।”
भारतीय क्रिकेटमा उनीभन्दा राम्रो मान्छे छैन- हरभजन
याे पनि पढ्नुस क्रिकेटपछि हरभजन र इरफान पठान अब फिल्म खेल्दै
हरभजन सिंहले लेखेका छन्,”यो साँचो हो र ? खै के हुँदैछ ? तपाईं भारतीय क्रिकेटमा उनीभन्दा राम्रो मान्छे भेट्टाउनु हुन्न । यस्ता महान खेलाडीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु उनीहरूको अपमान गरे जस्तै हो । क्रिकेट राम्रो बनाउन उनको साथ चाहिन्छ । भारतीय क्रिकेटलाई त भगवान नै बचाओस ।”
ट्याग्स: भारतीय क्रिकेट टोली, राहुल द्रविड, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह